मधेश आन्दोलनको क्रममा तोडिएको गणेशमानको शालिक पुनः निर्माण गरी अनावरण – Ankush Daily
मधेश आन्दोलनको क्रममा तोडिएको गणेशमानको शालिक पुनः निर्माण गरी अनावरण
नेपालका कम्यूनिष्टहरु हदै सम्मको नालायक रहेको नेता सिंहको आरोप
On २१ माघ २०७६, मंगलवार ००:०६
मधेश आन्दोलनका क्रममा २०६३ मा तोडिएको स्व.गणेशमान सिंहको शालिकलाई पुनः निर्मँण गरी अनावरण गरिएको छ । गणेशमान फाउण्डेशनले उपलब्ध गराएको नेपाली कांग्रेसका लौह पुरुष सिंहको शालिक वीरगन्ज ४ गणेशमान चौकमा नै सोमबार अनावरण गरिएको हो ।
गणेशमान फाउण्डेशनका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका नेता फ्रकाशमान सिंहले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शालिकको अनावरण गरेका थिए । सो त्रममा उनले रैतीको अवस्थामा रहेका जनतालाई नागरिकका रुपमा बनाउन शहादत्त दिने सबैको सम्झनामा शालिकले स्मरण गराउन सक्नुपर्ने बताए ।
एक दुईवटा चटक–मटक भाषण गर्दैमा उसको सक्षमता छ भन्ने मापन हुँदैन । २००७ साल, २०४६ साल र पछिल्लो गणतान्त्रिक आन्दोलनको पनि नेतृत्व काँग्रेसका स्व. गणेशमान र स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको इतिहास नेपालमा ज्यूँदै छ । बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अग्रजहरुको नीति नेतृत्व गर्ने शैलीलाई चिनेर एक ढिक्का भएर अगाडी बढ्नु पर्ने उनको भनाइ रहेको थियो ।
नेपाली काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सिंहले नेपालका कम्यूनिष्टहरु हदै सम्मको नालायक रहेको आरोप लगाए । उनले उदाहरण दिदै भने, चारचार वटा प्रधानमन्त्री बनेका कम्यूनिष्ट नेतृत्वको सरकारले एक थान संविधान दिन नसकी नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधान दिन सकेको दावी गरेका थिए । आफै घोषणा गरेको पूजिगत खर्चको तथ्याँकले यो सरकारको क्षमता पनि उदाँगो भइसकेको उनको भनाइ रहेको थियो ।
सुशासनका कुरामा पनि यो सरकारले पश्चिमकी चेली निर्मला पन्त र वातावरण बचाउनु पर्छ भन्ने दिलिम महतोको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नुले सरकारको क्षमता देखाइ सकेको नेता सिंहले बताए ।